Ọrụ ndị Ọrụ - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
N'okpuru ebe a BANYERE ị nwere ike ịnụ ụtọ ya ...
Ngalaba na-azụ ihe magburu onwe ya na ngalaba njikwa mma, na n'ezie, ọkachamara ahịa.
Yabụ ROCPLEX nwere ntụkwasị obi zuru oke iji bụrụ ngalaba ntụkwasị obi ị ga-ahụ maka ịga mba ofesi.
Afọ 25 nke ịzụ ahịa ezinụlọ osisi ka anyị nwee obi ike ịme ezigbo ọrụ n'ịrụ ụlọ ịzụta ihe ngwaahịa.
Agbanyeghị na ọnụahịa ihe ụlọ dịkarịsịrị ala na China, May nwere ike ọ bụghị ọ dị mma ịtọlite ​​ụlọ ọrụ ofesi ma were ndị ọrụ were ya maka ị nweta China. Ozi ọma ahụ bụ na ROCPLEX na-enye ụzọ ọzọ ka mma. ROCPLEX na-arụ ọrụ dị ka onye na-emezu iwu iji nye gị aka n'ịzụ ngwaahịa sitere na China. Dabere na njem kachasị uto, ROCPLEX na-eme ihe kachasị mma maka ọnọdụ a dị mma, yabụ nwere ike ịchọta ndị na-eweta ngwaahịa nke ọma ma belata nkenke nnweta ahụ. Maka nke a, ROC na - enye gị ohere iwepụ ụgwọ, ịnụ ụtọ ọrụ ịzụrụ ndị ọkachamara, n'ezie na ọnụahịa kacha mma, ma nweta nnukwu elele na China.
N’ezie, ọ naghị adị mfe ịchọta ezigbo ndị na-eweta ngwa ngwa ụlọ. Agbanyeghị, itinye usoro amamịghe nke ime obodo na imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ ndị China na ụlọ ọrụ njikọta, ROCPLEX nwere nka na ijikwa ndị na-eweta ngwaahịa ndị China yana nwee nnukwu ụlọ ụlọ dị elu na-enye ihe onwunwe na iwu, ọkachasị na ngwaahịa osisi na ngwaike. N'ime afọ 25 gara aga, ROCPLEX nwere ụlọ ọrụ ezinụlọ nke ụlọ osisi na-arụpụta ngwaahịa, yana ndị ahịa ， ROCPLEX mara ụlọ ọrụ ndị ọgbọ na usoro ngwaike ụlọ ọrụ ndị metụtara ya. Yabụ na iji ọtụtụ nde ngwaahịa ụlọ arụpụtara na China, anyị nwere ike ijikọ gị ma mee ka ngwaahịa dị mma.
Directlyzụta ihe site na ndị na-eweta ntanetị abụghị naanị na-eri oge, mana ọ nwere ike ịbụ nsogbu na nsogbu.
N'ụzọ dị mma, ROCPLEX na-enyere gị aka ịchọpụta ma nyochaa ndị na-eweta ngwaahịa dabere na ahụmịhe agbakọtara agbakọtara yana usoro teknụzụ, ma jikọta gị na ndị na-eweta ngwaahịa a tụkwasịrị obi.
Mgbanwe & ngwaahia
Egosipụtara dị ka onye na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ROCPLEX na-enye ọrụ ntinye nke ahaziri iche, nke gụnyere mana ọnweghị oke iji zụta nzụta, nyocha dị mma, MOQ na nyocha ịkpụzi ebu, ngwongwo na-eburu, na-enyere aka na mkpochapụ kọstọm na mbelata ọrụ. Site na ndị ọrụ ahụmịhe nke ọma, anyị nwere ike ịghọta ma zute mkpa gị.
Anyị nwere ndị mmekọ na-eguzosi ike n'ihe na ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na mba ahụ, na afọ 25 nke ahụmahụ mbupụ na-enyere anyị aka inweta ọnụahịa njem dị ọnụ ala na ọrụ nlekọta ọrụ dị mma.
Ma ọ bụ ndị nnọchi anya nnweta nnweta, nnabata kọstọm ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ndị nnọchi anya, ma ọ bụ nzụta akpa, anyị nwere nkwa zuru oke iji nye gị ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi na ọnụahịa kacha mma.
Ndị mmadụ na-ahụkarị ohere azụmaahịa site na ịbịpụta na China, mana nleghara anya na ọdịiche oge, ọdịbendị ọdịbendị na asụsụ nwere ike ịbụ ihe mgbochi. Ma ugbu a, ị nwere ike izu ike dị mfe maka ROCPLEX ga-anapụta gị n'ụdị "ibuli ibu a". Youkwesighi ịmekọrịta ụlọ ọrụ ise ma ọ bụ isii, mana naanị ROCPLEX, n'ihi na anyị nwere ike belata nghọtahie nkwukọrịta, soro ozi nsuso ụlọ, kwado arụmọrụ ka mma ma belata isi ọwụwa gị.